Qeybaha hormarinta halganka Ogaadeenya ee dalka Australia oo ka qeybgalay shir loogu magacdaray 'Dumarka oo Isbadal Hogaaminaya.
Dec 2, 2012 (QOL) Waxaa Lagu qabtay shir Aad caalami u ah oo lugu qabtay gobalkaVictoria, magaalada Melbourne. Shirkaas Ayaa soo abaabulay hay'ad u shaqeysa Qeybaha xaquuqul insaanka ' Humanitarian Crisis Hub' islamarkaana ku casumay Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Soomaalida Ogadenia ee Melbourne iyo jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria. Shirkaas Ayaa waxaa ka qeyb galay Naima Mohamed ismaciil, Luul Abdi Macali,, Sumeya Abdi Macali, iyo Hani Cabdulahai Macalim oo matalayeey dhamaan jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Australia, Ururka Haweenka Soomaalida Ogadenia ee Australia iyo Ururka OYSU ee Pacific. Shirkaas Ayaa muhiimadiisa aheyd in looga hadlo isbadalkanka eey Dumarka ku soo kordhin karaan bulshada, gaar ahaan bulshada Durmarka lagu hayo cunaqabateen, faraxuumeen sida kofsiga. Waxaa ka soo qeybgalay shirkaas dumar ka socda wadamada dumarka dhibaatooyin lagu hayo sida Afghanistan, Pakistan, Iran, Congo. Waxaa shirka furay gudoomiya Ururka 'Crisis Hub' Denise. Waxeeyna u mahadcelisay dhamaan Dumarka ka soo qeybgalay shirkaan. Waxay kaloo Denise taabatay in hormar iyo isbadal eey dumarka gaarsinkaraan bulshada eey ku noolyihiin. Waxeey halkaass ku soo qaadatay tuusaalo Ururka Haweenka Afghanistan iyo sida wanagsan eey Isbadal iyo hormar u gaarsiyeen dumarka ku nool Afghanistan. Shirkaan Ayaa aha' mid dumarka kaladuwan oo ka socday jaaliyaadka kaladuwan ee ku nool dalka Australia ey dood iyo cilmi isweydaarsadan, waxaana dooda hogaaminayeey Naima Maxamad Ismail oo matalaysay jaaliyada Soomaalida Ogadenia, OYSU Pacific iyo Ururka Haweenka Soomaalida Ogadenia ee Australia.
Waxeey u aheyd fursad qaali ah dhamaan jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Australia, waxaana dhamaan xubnaha ka qeyb galay shirka ey u soo hoyiyeen guul. Waxeey xubnaha la kulmeen Steph oo ka socoto Oxfam Australia oo halkaas si mug leh ay xubnaha ogala hadleen Ogadenia iyo xaaquuq la’aanta ka jirta. Naciima iyo Luul ayaa halkaas ka soojeediyeey warbaxeen ku saabsan dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Ogadenia iyo sida Jaaliyaadka S/Ogadenia iyo uru hoosaasyada hoosyimaada ay isku abaabuleen una u istaageen in ey dhibaatooyinka shacabka Ogadenia wax oga badalilahaayeen. Waxaa kalo kalkaas ku so badhigeen xubnaha shirka urur ey haweenka iyo ciyaalka S/Ogadenia lagu talagay seey hormarka dumarka iyo ciyaalka.
Waxaan sodiri doona qoraal kusaabsaan qodabadii shirka oo ku qoran Afka Engriska mardhow ee ha kafogaanin Qorahay Media. Qeybta Halganka Dumarka Ogadenia waa mid lagu qoridoono buugga taarikhda Adaanku. Guul iyo Gobanimo Leyla Abdi Qorahay Media